Hlola iCopenhagen, eDenmark - World Tourism Portal
Hlola iCopenhagen, eDenmark
Yini ukubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili ezihamba phambili eCopenhagen, eDenmark
Yini okufanele uyenze eCopenhagen, eDenmark
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeCopenhagen
Bukela ividiyo mayelana neCopenhagen
Hlola iCopenhagen, inhloko-dolobha ye Denmark nokuthi uDanius wesigidi ubiza malini ekhaya. Le “ntombazane endala yedolobha elinobungane” inkulu ngokwanele ukuba yidolobha elikhulu elinezitolo ezinhle, amasiko nokuphila okuhle ebusuku, kodwa incane ngokwanele ukuba isondelane, iphephe futhi kube lula ukuyisebenzisa. Ukweqa ubunzima be-Øresund neSweden imizuzu nje embalwa, kuyinto exhumanisa amasiko kanye nokuma komhlaba phakathi kwezwekazi laseYurophu neScandinavia. Lapha kulapho izinganekwane ezindala zihlangana khona nobuciko obusha bokwakha kanye nomklamo osezingeni lomhlaba; lapho i-jazz efudumele ixubana khona ne-electronica ebandayo evela ezingaphansi kweCopenhagen. Uzozwa ukuthi ukubone konke ngosuku, kepha ungaqhubeka nokuthola okuningi izinyanga.
ICopenhagen, njengalo lonke iDenmark, inezinkathi ezine ezihlukile. Isikhathi esihle sokuvakashela isikhathi esifudumele kusukela ekuqaleni kukaMeyi kuze kube sekupheleni kuka-Agasti.
Indlela esheshayo futhi eguquguqukayo yokubona iCopenhagen isesithuthuthu. Amaphesenti angama-40 abantu bendawo asebenzisa izithuthuthu zabo nsuku zonke futhi idolobha lenzelwe ukondla abahamba ngamabhayisekili abanemigwaqo ehlukene yamabhayisekili emigwaqweni emikhulu. Abahamba ngamabhayisekili bavame ukuvunyelwa ukugibela zombili izindlela emigwaqweni enendlela eyodwa. Qikelela ukuthi uma ungejwayele ukuhamba ngebhayisekili edolobheni elinabantu abaningi njengoba lokhu kuyindlela ejwayelekile yokuhamba nsuku zonke futhi abantu bendawo beshayela ngesivinini esikhulu futhi ngaphandle kwendawo enkulu. Ungalindeli ukuthola isixwayiso lapho othile efuna ukukuthola. Hlala njalo ngakwesokunene ubheke emva kwakho ngaphambi kokuthola othile - ngaphandle kwalokho ungadala izingozi ezimbi. Ngenkathi uhamba ngebhayisekili, ungamangali uma bethi ngokwemvelo kuwe hi; unjalo nje maDanie muhle kanjani.
Njengoba amabhayisekili edolobha angabiza kancane, ukuqasha ibhayisikili kuyindlela enhle futhi amahhotela amaningi noma izitolo zebhayisekili aqasha amabhayisikili.
I-1.1 kilometre Strøget, kanye nemigwaqo eseceleni kwayo ehamba ngezinyawo, ingenye yemigwaqo emide kakhulu yabantu abahamba ngezinyawo eYurophu naseNduneni yezitolo yaseCopenhagen
IStrøget ingelinye lamamakethe amakhulu abahamba ngezinyawo emhlabeni axhumanisa iCity Hall, iKongens Nytorv, nesiteshi saseNørreport. Abantu bendawo abagqoke kahle beshaya umoya ngasesikhathini sefashini ephezulu nezindawo zokudizayina lapho bengahlanganisi izixuku zezivakashi ngesikhathi sasehlobo nangoKhisimusi. Izivakashi zakho ezikanye nazo zingenza zonke zizizwe zivakashele ngezikhathi ezithile kodwa uma kungenjalo, kuhle kakhulu kubantu ababukayo. Uma konke lokhu kuyothenga okungajwayelekile okukuthatha kukude kakhulu nendawo yakho ejwayelekile, yiya eMagasin du Nord (eKongens Nytorv) noma e-Illum (e-Amagertorv) ukuthola indawo ejwayelekile. Kukhona ngisho nendawo yangempela yezitayela zaseMelika ephelele ngendawo yokupaka i-gargantuan e-Amager. Ngokufanelekile, ibizwa ngokuthi amaNsimu.
Uma ungathanda ukusampula izitolo ezincane neziningi ezenzelwe wena, ikota yemigwaqo emincane ezungeze iStrøget edolobheni elidala (elaziwa ngokuthi iPisserenden kanye neLatin Quarter), inhlanganisela yezitolo enhle kakhulu. Lokhu kusuka emabhizinisini akudala e-quirky ekhulu ukuya e-ultra-hip emikhakheni ehlukahlukene. Futhi igcwele kakhulu kune-Strøget, yize ngeshwa akubizi kakhulu.
Ungazama futhi i-Vesterbrogade ne-Istedgade eVesterbro, ngenxa esentshonalanga esiteshini esimaphakathi, yize uzodinga ukuhamba amabhlokhe ambalwa ngaphambi kwamahhotela / izitolo zocansi / izindawo zokudlela zaseThai ziphenduka insimu ethakazelisa ngokwengeziwe. Emngceleni wale ndawo, iVærnedamsvej neTullinsgade nazo zibheja kahle.
ENørrebro, kube nokusungulwa okukhula ngokushesha kwezitolo ezincane ezizimele zezikebhe nezindawo zokudlela zemfashini eminyakeni embalwa edlule. Ikakhulu uJægersborggade ohlangothini olusenyakatho yendawo yesonto ethi "Isiza i-Kirkegården" uyakufanele ukuvakashela, uma ufuna isudi yezandla evulekile yasesitolo, isitolo esishintsha izingubo noma umsebenzi wakamuva ovela kumlobi waseDanish okhombisa izinkanyezi. Uma ufuna ubuciko bezinsizakusebenza kanye nama-antique Ravnsborggade waziwa ngobuningi bawo bezitolo zakudala ezihamba phambili ngokuzingela. Eduze kuka-Elmegade kunokuxubana okuhle kwezimbali zemfashini.
Imithetho ibeka amahora wokuvula ezitolo eziningi, ngokusemthethweni ukuze kusizakale abasebenzi. Umthetho wokuvala (“Lukkeloven”) ukhululiwe eminyakeni yamuva. Izitolo eziningi zizovala cishe i-6PM phakathi nezinsuku zaphakathi nesonto, ezinye zizungeze i-7-8 PM (ikakhulukazi leyo ese-Strøget), kanye ne-2-4 PM ngemiGqibelo. NgamaSonto, ezinye izitolo ezinkulu zivame ukuvulwa. Ukuthenga okungaphandle kwamahora futhi (ngaphandle kwe-XiUMX-7 ethengisayo kanye nezindawo ezincane), izitolo eziseCentral Station (zinikeza izincwadi nama-CD, amagiya wokukanisa, imishini yezithombe, izimonyo, izipho) zivulwa kuze kube yi-11PM nsuku zonke. Izikhungo ezinkulu zokuthenga nezitolo zomnyango zivulwa ngamaSonto cishe kanye ngenyanga (imvamisa ngeSonto lokuqala, ngemuva nje kokuba wonke umuntu ekhokhelwe) kaningi ngezikhathi zokuthengisa okuphezulu. Izitolo eziphethwe ngumngeneleli izitolo ezifana Nørrebrogade eNørrebro nazo zivame ukuvulwa kuze kube kusihlwa kakhulu kusihlwa nsuku zonke.
Imakethe yezimbaza ivame ukubizwa ngokuthi yiLoppemarked ngesiDanish.
IHalmtorvet endaweni yaseVesterbro, eduze kwesiteshi esikhulu. Kuvulwa ngeMigqibelo ngenkathi yehlobo. Enye yezindawo ezinokhetho lwekhwalithi engcono.
UFrederiksberg Loppemark esigcawini ngemuva kwehholo ledolobha laseFrederiksberg Rådhus. Kubaluleke kakhulu edolobheni, ngeMigqibelo ngesikhathi sasehlobo, nokukhethwa okubanzi kwekhwalithi ehlukahlukene.
Isikwele i-Thorvaldsens Museum isikwele neKongens Nytorv isikwele maqondana neD'Angleterre Hotel nazo zivame ukuba nezimakethe zezindiza (okungenani ngeMigqibelo) ngesikhathi sasehlobo, ngezinto ezisezingeni elingcono.
IMakethe yaseNørrebro Flea yinde kakhulu futhi incane kakhulu eDenmark. Ifinyelela kumamitha we-333 engxenyeni eyodwa yomgwaqo eceleni kodonga lwe-assistens Cemetery e-Nørrebrogade. Vula kusuka ku-4 Ephreli kuze kube yi-31 Okthoba ngeMigqibelo 9: 00 - 15: 00. Kodwa-ke, iningi lezitobha selibe sezingeni eliphansi kulezi zinsuku, njengemakethe yezimbaza iya ngaphezulu eNwardsrrebrogade, esiteshini saseNørrebro (NgoMgqibelo). Eduze kweCustomer Cemetery, iGuldbergsgade nayo inezimakethe ezimbalwa zezimbaza ngemigqibelo yangoMgqibelo phakathi nesikhathi sasehlobo.
Imakethe yezindiza endala kunazo zonke eCopenhagen iku-Israels Plads, eduze kweNørreport S-Sitima Sesitimela. Kodwa-ke okwamanje (i-2014) ivaliwe, ngenxa yokulungiswa kwesikwele, okungenzeka ukuthi iphela ku-2015.
Eminyakeni engu-20 edlule, bambalwa abantu abebecabanga ukuthi iCopenhagen iyindawo yokuya endaweni ebusayo Lokhu kushintshe kakhulu kusukela ngaleso sikhathi, futhi namuhla ukudla okuvela ezweni lonke kuya eCopenhagen ukuzwa okuhlangenwe nakho okusha kokudla kwesimanje. I-New Nordic Cuisine ukunyakaza kube ngumshayeli ophambili walesi singuquko esinamandla, esigcizelela ukupheka kwalapha ekhaya, ngokwesizini nangokwezifiso ezincane. Lokhu kuthambekela nje kokusakazeka kusuka ezindaweni zokudlela ezi-gourmet kuya ezindaweni zokudlela eziphakathi nendawo kanye nesabelomali eCopenhagen, kepha kusabalale emhlabeni wonke njengendlela yokudla neyokuphilayo yemvelo enempilo. I-New Nordic beacon ngokubabazekayo yiDurban Noma, eyavulwa ekuqaleni nge-2003 futhi yavula kabusha endaweni entsha e-2018, kodwa izindawo zokudlela eziningana eCopenhagen zithathe i-New Nordic Cuisine. Izinga eliphakeme lokudlela laseNordic edolobheni nalo libe nomthelela obalulekile wokuchitha kwezinye izindawo zokudlela. Hhayi nje lapho uzothola ukupheka okuphezulu kakhulu ezindaweni zokudlela eziningi ezisebenzisa isabelomali, uzothola nezinye zokudlela ezinhle kakhulu zaseMexico, Thai kanye naseFrance eCopenhagen.
Ama-cafés nawo alungele ukusebenzela ikhekhe noma ubhiya newayini kodwa zivame ukuvala phakathi kwamabili nomculo uyanqotshwa ukuze kuvunyelwe izingxoxo. Baphakela nokudla.
I-Bodegas izimbobo zakho zokunisela ezijwayelekile zasendaweni, ezicishe zifane ne-pub, ngamanani ngokuvamile aphansi kakhulu kunamabha nezindawo zokudlela ezinkulu. Iklayentile livama ukugqama kancane futhi ungahle ube nabantu ubheka amakhasimende angajwayelekile kodwa baziphathe kahle futhi bavame ukukufudumeza. Zama ukuthi othile akufundise imidlalo yasendaweni ye-træmand, ye-meyer, noma yedayisi yobusuku obumnandi.
Ama-Pubs anjalo nje, ama-Pubs, isiNgisi, isi-Iris, nesithumela esijwayelekile esihanjiswa kwamanye amazwe esivame ukungahambisani kangako nama-pubs wangempela kulawo mazwe angaphandle kobhiya nakwamanye amazwe.
Amabha yilokho abantu bendawo bavame ukubiza konke ngomculo omkhulu ongenayo imali yokufaka. Igcwele ngezimpelasonto kodwa kuthule kakhulu ngezinye izikhathi.
Amakilabhu, noma ama-discotheques njengoba evame ukubizwa lapha, yimigoqo enesembozo futhi enendawo yokudansa. Ngokuvamile kuvulwa kuphela i-Th-Sa.
Morgenværtshus. Uma ungahle uphimise lokhu uma uzoyidinga, uzobe ucela izinkomba eziya endaweni enamahloni egcwele abantu esihogweni abazimisele ngokungaphezi ubusuku njengamanje. Ngokuvamile bavula i-5AM bese kuthi “ama-classics” afaka ihora le-24 eHong Kong eNyhavn, eCafé Guldregn eVesterbro nase-Andy enkabeni yedolobha.
Isigcawu sekilabhu siyabonakala eCopenhagen, kepha amakilabhu amaningi avulekile kuphela kuTh-Sa. Qaphela ukuthi iningi labantu likhona ephathini ekhaya nabangane noma njalo imigoqo yabo eyithandayo, ngaphambi kokuba baye emakilabhini, ngakho-ke akuvamile ukuba baqhubeke kuze kube phakathi kwamabili bavala i-5AM. Amakilabhu amaningi agcina iminyaka yobudala engu-20 noma i-21, yize kungafuneki enze lokhu ngokomthetho.
Izivakashi ezifuna ukungenela iSu-W ​​mhlawumbe kuzodingeka zizingele zizungeze ukuthola indawo ngesenzo esithile kodwa kukhona ezinye izinketho:
I-København Operaen (kusuka esikebheni)
Izindawo eziningi zomculo eCopenhagen zibuye ziphindwe kabili njengama-nightclub ngakho-ke zibukele ngaphansi kwezingxenye ze kilabhu ezifundeni ezihlukene. Amathikithi cishe wonke umcimbi waseDenmark naseCopenhagen athengiswa ngeBilletnet enakho ukuthengisa online kanye nekhawunta etholakala kuwo wonke amahhovisi eposi. Kodwa ngaphandle kwemicimbi yezihloko, amathikithi ngokuvamile athengiswa emnyango.
Izindawo ezinkulu zomculo eCopenhagen ziyinkundla iParken e-Østerbro yezinkanyezi ezinkulu. ICopenhagen / Indre_By, iCopenhagen Jazzhouse ngokusobala isingethe amakhonsathi e-Jazz futhi i-The Rock iyikhaya elingokomoya sedwala lendawo nasendaweni enensimbi esindayo. IVega eseVesterbro yindawo enkulu enamakhonsathi cishe ayo yonke inhlobo yezenzo zamazwe nezakwamanye amazwe. INørrebro inezindawo ezimbili: Isiteji sikaRust ikakhulukazi sisingatha umculo onesigqi kanye neGlobal, njengoba negama laso lingasho, inikezela isigaba somculo womhlaba. Eningizimu kwiChristianhavn, akumangazi ukuthi i-Operahouse idlala i-Opera futhi ingaphuthelwa, izindawo ezahlukahlukene zeChristiania ziyindawo yokugcina amandla eDenmark namasiko angaphansi komhlaba.
Yize iDenmark iyilungu le-European Union, imali eseyiDanish Krone. ECopenhagen, Nyhavn, Tivoli, kanye nezindawo zokudlela ezinkulu kanye namahhotela ajwayelekile abavakashi bamukela iSweden Kronor ne-Eroo, yize kungakenziwa into ejwayelekile kwenye indawo.
Amakhadi wesikweletu amukelwa kabanzi, yize lokhu kuvame ukukhawulelwa ku-Visa kanye / noma kwi-Mastercard. Izitolo ezinkulu eziningi kanye nezitolo ezincane zivame ukwamukela ikhadi elibanzi leDenmark lasebhange, elibizwa nangokuthi iDankort. Kodwa ukwamukelwa kwamakhadi wesikweletu amakhulu amabili aphesheya kukhula ngokushesha okukhulu. Amanye amakhadi wesikweletu afana neAmerican Express, i-Diners, i-JCB, ne-Unionpay amukelwa kwezinye kodwa akuzona zonke izitolo eCopenhagen, ikakhulukazi eStrøget, okuyindawo enkulu yokuthenga. Lapho yamukelwa, imali yokuthenga (egunyazwe yizinkampani zamakhadi wesikweletu, hhayi izitolo) ye-0.75 kuya ku-4.00% yenani ngokuvamile izokhokhiswa kumakhadi wesikweletu akhishwe ngamabhange angaphandle.
Cishe wonke ama-ATM amukela amakhadi amakhulu aphesheya, kufaka phakathi wonke lawo ashiwo ngaphambili. Ngakho-ke kubalulekile ukuqaphela ukuthi yize ezinye izitolo zingahle zingawemukeli wonke amakhadi wesikweletu, i-ATM ekwazi ukwenza njalo ezimeni eziningi izoba ngaphansi kwamamitha we-200, ikakhulukazi enkabeni yeCopenhagen.
Hlola iCopenhagen kanye eduze kwayo ngamadolobha
IMalmö, eSweden, idolobha lesithathu ngobukhulu laseSweden, elinesikhungo esihle sedolobha elithandekayo nezinkundla ezithandekayo kumane nje kuyindlela elula yokuhamba ngesitimela.
I-Elsinore (Helsingør) Isikhungo sedolobha esidala esinezindlu ezigcinwe kahle singenye yezindawo ezinkulu kunazo zonke ngaphakathi Denmark, nenqaba edumile yaseKronborg, ikhaya likaShakespeare's Hamlet.
I-Hillerød - idolobhana elawulwa yisigodlo salo esikhulu, kodwa futhi linikeza izingadi ze-baroque kanye nesikhungo sedolobha esisele emuva.
Roskilde - Inhloko-dolobha yakudala yaseDenmark nendawo yesakhiwo seGugu Lomhlaba, enekhatholika elidumile eligcwele amathuna amakhosi asendulo, nomnyuziyamu omnandi waseViking. Ikhaya komunye wemikhosi yomculo weBig Four European, iRoskilde Festival, eheha izivakashi ze110,000 unyaka ngamunye ngoJulayi.
Imyuziyam yaseLouisiana yobuciko besimanje iyimnyuziyamu evelele yobuciko besimanje eDenmark. Itholakala edolobhaneni elincane leHumlebaek okuyi35km enyakatho neCopenhagen. Noma ngubani ofisa ukuhlola iCopenhagen uzothola okuthile okufanele akwenze ukwenza lolu hambo lufanele.